Noolaanshaha la'aanta daawaynta HIV | Zanzu
Astaamaha HIV aan la dawayn
Haddii uu qof qaado HIV, isaga ama iyada waxa uu yeelan karaa astaamaha soo socda:
Todobaadada koowaad: isaga /iyada waxay heli karaan astaamaha shabaha hargabka, finan ama barar qanjidhada limifka
Ka dib waxaa raacsan muddada aan astaamaha lahayn.
Haddii isaga ama iyadda aan laga dawayn HIV markaa:
Wakhti ka dib (tani waxay noqon kartaa 2 sanadood ama wax ka badan) isaga /iyadda waxay heli kartaa cabashooyin cusub iyo /ama astaamo kala duwan oo cusub.
HIV waxay weerartay nidaamka difaaca jidhka. Daawayn la'aan, qof qaba HIV waxa uu noqon doonaa AIDS dhowr sanadood ka dib. Nidaamka difaaca jidhka aad ayuu u itaal daran yahay in jidhka uu unuglaado cuduro kale oo badan. Cuduradan waxay keeni karaan dhimasho.
Daawayn la'aan, nidaamka difaaca jidhka qofka qaba HIV aad ayay u daciiftahay isaga /iyadda waxay u nuglaan doontaa cudurada kale oo waa uu jirraanaada.
La noolaanshaha HIV marka la daweeyo
Inta degdeg badan ee lagu daweeyo qofka qaba HIV, inta yar ee halista ay cawaaqib ku yeelato /caafimaadkeedakiisa, Isaga /iyaddu waxa uu ku noolaan karaa nolol caadi ah oo waxa uu noolaadaa ilaa inta uu noolaado qofka aan qabin HIV.
Haddii qof qaba HIV la daweeyo, ugu badnaan ma jirtokhatar ah qaad siinta dadka kale dhexda galmada aan ilaashanayn.
Qofka qaba HIV waxa uu ku noolaan karaa nolol caadi ah.
Is baadh haddii aad doonayso hubaal ahaan inaadan qabin HIV. Waydii dhakhtarkaaga guud,adeegada caafimaadka dad waynaha ee degmada (GGD) ama xirfad yaqaanka caafimaadka xaga xarunta caafimaadka ee xarunta magan galyo doonka wixii caawimo ah.
Mowduuyo badan oo la xidhiidha Noolaanshaha la'aanta daawaynta HIV
U sheegida qof inaad qabto HIV